China oo dhisaya Tiyaatarka Qaranka, Stadium Muqdisho Cisbitalka Banaadir iyo jidad kale – Radio Daljir
Seteembar 10, 2013 2:16 b 0
Muqdsho, September 10, 2013 – Xukuumada Shiinaha ayaa soo celinaysa xiriirkii awooda badnaa ee kala dhexeeyey Soomaaliya, iyadoo dib u bilaabaysa haatan dib-u-dhiska goobaha muhiimka ah ee dalka, iyo dar dar gelinta xiriirka labbada wadan.
Magaalada Muqdisho shalay waxaa booqday saraakiil sar sare iyo diblumaasiyiin ka socday xukuumada Beijing ee shiinaha, kuwaas oo u kuur-gelayey qorshaha dowladda Shiinaha ay kaga qeyb-qaadanayso dhismaha dalka Soomaaliya.
Khuburada ka socday Shiinaha ayaa waxaa ku jiray safiirka cusub ee China u fadhiya Soomaaliya, waxaana ay il gaar ah ku eegayeen dhismayaal hore oo ay Jamhuuriyada Shiinaha ka dhistay dalka, balse bur bur xoog leh uu ka soo gaaray dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.
? 50 sano ka hor Soomaaliya waa dalkii ugu horeyey ee ku yaala barriga Afrika ee Shiinuhu la yeesho xiriir qoto-dheer, waxaan halkan u nimi in aan eegno baahiyaha ka jira dalka, waxaan rajo weyn ka qabnaa in aan dib u dayactirno meelo muhiim u ah wadanka, isla markaasna dhisno jidad iyo xaruumo cusub? ayuu yiri safiirka Shiinaha u jooga Soomaaliya.
Dhismayaasha dumay ee China ay dayactirasyo waxaa ka mid ah, Tiyaatarka Qaranka, Garoonka Kubadda Cagta (Stadium Muqdisho) , Isbitaal Banaadir, kuwaas oo horey ay u dhistay dowladda China, sidoo kale qorshaha dhow ee Shiinaha waxaa ka mid ah in la dhiso wadada isku xirta Galkacayo ilaa Burco.
Khuburada iyo diblumaasyiinta ka socda Shiinaha ayaa safarkoodu wuxuu imanayaa toddobaadyo kadib, markii wasiirka arrimaha debeda ee Soomaaliya Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ay booqatay Beijing xaruunta Shiinaha, halkaas ay heshiis kula gashay madaxda Jamhuuriyada shiinaha.
Marwo Fowsiyo oo ka hadashay booqashada madaxda ka socota shiinaha ee timi Soomaaliya, waxaa ay ku sifeysay in ay hir-gelin iyo cadayn u tahay wada-hadalladii labbada wadan ay ku gaareen dalka Shiinaha ee dhowaan dhacay.
Maamulka degmada Qandala oo shaaciyey in biyo-yaaran daran ka jirto degmadaas (Dhegeyso)